January 2018 – Page2– Trend.com.mm
သင့်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသိရဲ့လား?
Posted on January 30, 2018 by Noel
သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာတွေးတောနေတဲ့အတွေးတွေက သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။သင့်ရဲ့အတွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားပါတယ်။ဒါဆို ဘယ်လိုအတွေးတွေက ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တာ လဲကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ဒေါသထွက်မှုက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on သင့်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသိရဲ့လား?
ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးမွေးဖွားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီး Jun Ji Hyun
မင်းသမီးချောလေး Jun Ji Hyun ကတော့ အခုဆိုရင် သားလေးနှစ်ယောက် အမေဖြစ်သွားပါပြီ။သူမရဲ့ ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကတော့ ၂၀၁၆ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးမွေးဖွားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီး Jun Ji Hyun
အိမ်တိုင်းမှာ ထည့်ထားသင့်တဲ့အကောင်းဆုံး အပင်လေးများ
Posted on January 29, 2018 by Wint
ပန်းအိုးလေးတွေဟာ အိမ်တစ်အိမ်ကို နွေးထွေးစေပြီး ပိုလည်းလှစေတယ်။ ပန်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့် ဘယ်လိုအပင်၊ ပန်းလေးတွေကို အိမ်မှာထားလို့သင့်တော်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်း (၁) » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on အိမ်တိုင်းမှာ ထည့်ထားသင့်တဲ့အကောင်းဆုံး အပင်လေးများ
ကြည့်ကောင်းဖို့ထက် ဒီလိုအရည်ချင်းတွေရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကို သူတို့လက်တွဲချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း
တစ်ချို့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချောတာ၊ လှတာနဲ့ မတိုင်းတာဘူး။ သူတို့နဲ့အဆင်ပြေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေရှိရဲ့ လားဆိုတာကိုပဲ ကြည့်တယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ကြည့်ကောင်းဖို့ထက် ဒီလိုအရည်ချင်းတွေရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကို သူတို့လက်တွဲချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း
” သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ” ဆိုတဲ့ ဒီစကားဟာ နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် သနားဂရုဏာသက်နေမယ့်အစား အားပေးနှစ်သိမ့် ၊ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲ သူတို့တွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြလဲ?
တကယ်လို့များ လေဟာနယ်အာကာသထဲရောက်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြာခဏစူးစမ်းမေးမိမယ်ထင်ပငါတယ်။အာကာသယာဉ်မှူးတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကတော့သင့်ရဲ့သိချင်စိတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၁။အရပ်အနည်းငယ်ပိုရှည်လာမယ် တကယ်လို့များသင့်အရပ်ပိုရှည်လာတယ်လို့ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်အာကာသထဲကိုအလည်အပတ်သွားသင့်ပါပြီ။အာကာသထဲမှာဆိုရင်သင့်ရဲ့ အရပ်ကိုခဏတာတော့ ပိုပြီးရှည်လာစေ ပါလိ့မ်မယ်။ကမ္ဘာ့ဆွဲအားမရှိတဲ့အတွက် လူသားတွေရဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in People & Planet, ScienceLeaveaComment on အာကာသထဲရောက်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ တွေ့ကြုံခံစားရမှာလဲ?
လောကကြီးမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့နေ့ရက်တွေများလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်အပေါ် ချစ်သူလည်းပေါများလာနိုင်သလို မုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်ခွင်မှာပေါ့။ကိုယ်ကအကောင်းစိတ်နဲ့ပြောပေမဲ့ ကိုယ်ပြောသမျှကိုလိုက်ပြီး တိုက်ခိုက်နေတာ၊ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုမှကန့်လန့်တိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်ငန်းခွင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အပေါ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on အလုပ်ခွင်မှာ ကိုယ့်အပေါ်မလိုမုန်းထားသူရှိနေရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ?
နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Taeyang နဲ့Min Hyo Rin တို့ လက်ထပ်တော့မယ့် သတင်းကိုပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်က ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်နေ့မှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ပရိသတ်တွေသဘောကျနေကြတဲ့ Taeyang နဲ့Min Hyo Rin တို့ရဲ့ ချစ်စရာမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေး
Posted on January 28, 2018 January 24, 2018 by San Wadi Hnin
အသားအရည်ညစ်နွမ်းရခြင်းအကြောင်းတရားတွေထဲမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေတပုံတခေါင်းပါတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကိုနေ့ညမရွေးသုံးမိခြင်းက အဓိကပါဝင်ပါတယ်။ နေ့တဓူဝနေပူထဲထွက်နေရပြီး အသားအရည်ကို ဂရုမစိုက်မိခြင်းတွေ၊နေဒဏ်လေဒဏ်တွေဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းတွေက လည်း ညိုမွဲခြောက်ကပ်တဲ့အသားအရည်ရဲ့တရားခံတွေပါပဲ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on သဘာဝအတိုင်းဖြူစင်ကြည်လင်တဲ့ အသားအရည်ရစေဖို့
Posted on January 28, 2018 January 23, 2018 by San Wadi Hnin
ဆံပင်တွေက ဘယ်ကဘယ်လိုကျွတ်နေမှန်းကိုမသိတာ။ကိုယ့်ဟာကိုယ် ခေါင်းလျှော်ရင် ပါပါလာတဲ့ဆံပင်အထွေးလိုက်ကြီးတွေကို ကြည့်ကြည့််ပြီး အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်လွန်းလို့ ဆိုင်သွားလျှော်ရတယ်၊ကျွတ်ရင်တောင်ကိုယ်မမြင်ရတော့စိတ်မဆင်းရဲရဘူးပေါ့။ဆံပင်အကြောင်းတော့ ပြောမနေချင်တော့ပါဘူး ခေါင်းတုံးတောင်တုံးပစ်လိုက်ချင်တယ် ဆိုသူတွေအတွက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, Health, LifestyleLeaveaComment on ဆံပင်ကျွတ်တာသက်သာအောင် ဘာတွေစားရမလဲ